Nkwụ ụgwọ ekwentị ekwentị | Martech Zone
Nhazi ugwo ekwentị
Tuesday, July 12, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
N'ime afọ abụọ sochirinụ, 2% nke ekwentị niile erere ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ site na NFC (Near Field Communications) .. teknụzụ nke na-enye ohere aka na ịkwụ ụgwọ dijitalụ mgbe etinyechara ngwaọrụ gị n'ime sentimita ole na ole nke njedebe. . Ọtụtụ mmadụ na-ebu amụma na nke a nwere ike ịbụ njedebe nke ego ka anyị si mara ya. O doro anya na ọ ga-emetụta ụzọ ndị na-azụ ahịa ga-esi zụta ma zụta ngwongwo site na ntaneti mkpọsa!
Gtù Gerson Lehrman mepụtara nke a infographic n'ihi na ọ bụ G + Site. Dabere na weebụsaịtị ha:
G + bụ obodo ebe ndị na-arụsi ọrụ ike na ndị nwere mmetụta n'ụwa, ndị ọkachamara na ndị ọchụnta ego jikọtara. G + na-enye ebe ndị mmadụ ga-eso ndị nwere uche nwee mmekọrịta n'ụzọ ha na-atụlebeghị, bido mkparịta ụka ọhụụ, jụọ ajụjụ ndị dị mkpa ma gosipụta echiche dị n'ịntanetị na nzukọ mmadụ.
Retail + Search Local = Wishpond
Nwelite Gmail… Ka Ọgwụgwụ karịa Ọbịbịa
Julaị 12, 2011, elekere 12:40 nke ehihie
G+? Ana m atụ anya ha ka ịnụ ọkụ n'obi Google+ a kwụsịrị, n'ihi na G+ yiri ka ọ bụ mbiri nke Google+ nabatara.
N'ọnọdụ ọ bụla, nnukwu infographic!